Global Voices teny Malagasy » Soritan’ny hetsi-panoherana ataon’ny Baloch ny famoretana ireo vitsy an’isa ara-poko · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Marsa 2021 4:27 GMT 1	 · Mpanoratra Hamid Yazdan Panah Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Iràna, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nipoaka tamin'ny fiandohan'ity volana ity ny hetsika fanoherana ny governemanta tao amin'ny faritanin'i Sistan-Baluchistan ao atsimo atsinanan'i Iran, taorian'ny fitifirana namoizana ain'olona Baloch mpivarotra akoranafo folo farafahakeliny  nataon'ny fitondrana Iraniana, ary narehitry ny famoretana sy tsy firaharahiana ny vahoaka Baloch am-polony taona maro.
Sistan-Baluchistan no faritany mahantra indrindra ao Iran, izay miaina ambany tokonan'ny fahantrana  ny atsasaky ny mponina miisa 1.346.000. Io ihany koa no hany faritany izay izay mihoatra noho ny mponina an-tanandehibe ny isan'ny mponina an-tsaha , ary efa hatry ny ela no tsy mba ary fitaovana.
Toy izao ny fanambaràna  nataon'ny Amnesty International tamin'ny 2 marsa momba ny tifitra:
Taorian'io famonoana io, nipoaka  tany amin'ny faritany Sistan-Baluchistan ny fihetsiketsehana, nodoran'ny mpanao fihetsiketsehana tamin'izany ny fiaran'ny polisy iray ary nobodoin-dry zareo ireo tranom-panjakana. Voalaza fa farafahakeliny polisy iray no maty  tamin'ny fifandonana nifanaovan'ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny manampahefana. Nakaton'ny manampahefana ny fifandraisana aterineto  ao amin'ny faritra, raha lazain'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona ny fisian'ny fisamborana  maro.
Mitaratra ny tsi-fahafaliana namaka ampolony taona maro tamin'ny tsi-firaharahian'ny governemanta ny hetsi-panoherana. Araka ny tatitra nivoaka tamin'ny Jone 2016 avy amin'ny Iran Human Rights Review,  ny tetikasam-pampandrosoan'i Baluchistan dia latsaky ny 0,001 isanjaton'ny tetikasam-pirenena manontolo. Hoy ny tatitra:
Ny tsi-fisian'ny fitaovana ara-toekarena dia nampiarahana tamin'ny politika sy ny fanao izay manavakavaka ny Baloch sonita, na ara-kolontsaina na ara-pivavahana. Ny tosika hametrahana ny mari-panondroana Baloch dia vao maika norangitin'ny zavamisy fa miaina tsy manana antota-taratasy  [mg] ara-dalàna ao Iran ny kilonga Baloch. Avy amin'izany dia tsy ny fahafahana mahazo fanabeazana amin'ny fitenin-drazana no voatsipaka , fa amin'ny tranga sasany dia ny fitsipahana an-dry zareo tsy hizaka ny mahaolompirenena ihany.
Tsy nijanona hatreo anefa ny famoretana arovan'ny fanjakana: ampolony taona maro ny Baloch no lasibatry ny andiam-pisamborana, fanagadrana, ary famonoana ara-pitsarana ao Iran. Tamin'ny taona 2016, natao lohatenin-gazety ny Filoha-lefitra Iraniana rehefa  notondroiny tanàna kely iray tao Balochistan izay novonoina ara-pitsarana avokoa ny lehilahy rehetra, ary marihina fa ireo sisa velona tao an-tanàna dia niezaka nanao fanondranana an-tsokosoko mba hivelomana.
Efa ela ny fifanakalozan-kevitra amin'ny vahoaka Baloch no nafantoka tamin'ny fitoloran-tenan-dry zareo amin'ny lazaina ho “varotra tsy ara-dalàna miampita sisitany ”, lasitrasa miteraka olana ao aminy noho ny fanerena hametrahana famerana mifandraika amin'ny varotra sy ny fahazoana mivezivezy amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo. Mivelatra amin'ny sisintanim-panjakana-firenena telo i Balochistan ara-tantara, ary izay Baloch manao raharaham-barotra manerana ity faritra ity dia matetika no voatonona anarana ho “mpanao fanondranana an-tsokosoko.”
Nampiasaina nandritra ny taona maro ihany koa ireny marika ireny hanamarinana ny famoretana sy ny famonoa n'ny fanjakana ny Baloch ao Pakistan.
Vao haingana tamin'ity volana ity, tamin'ny fanambaràna iray manameloka ny famonoana ara-pitsarana  ny gadra Baloch iray, nilaza ny Firenena Mikambana fa farafahakeliny gadra Balochi 21 no novonoina ara-pitsarana tany amin'ny fonjan'i Zahedan, Mashhad, ary Isfahan hatramin'ny tapaky ny volana desambra 2020. Nampian'ny fanambaràna fa maro amin'ireo novonoina ireo no “voampanga amin'ny resaka rongony na manitsakitsaka fiarovam-pirenena, taorian'ny fombafombam-pitsarana feno lesoka.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/12/151833/
 folo farafahakeliny: https://www.hrw.org/news/2021/02/25/iran-killings-near-pakistani-border#
 ambany tokonan'ny fahantrana: https://iranwire.com/en/features/5841
 isan'ny mponina an-tsaha: https://iranwire.com/en/features/5523
 farafahakeliny polisy iray no maty: https://www.arabnews.com/node/1815856/middle-east
 fifandraisana aterineto: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3782/2021/en/
 fisian'ny fisamborana: https://iranintl.com/en/iran-in-brief/citizen-arrested-iran-protesting-killing-fuel-carriers-saravan?page=4
 Iran Human Rights Review,: https://www.ihrr.org/ihrr_article/economy-en_the-economy-and-human-rights-in-sistan-and-baluchestan/
 tsy manana antota-taratasy: https://mg.globalvoices.org/2019/08/28/142361/
 varotra tsy ara-dalàna miampita sisitany: https://www.iranhumanrights.org/2012/08/couriers_report/
 famoretana sy ny famonoa: https://www.huffpost.com/entry/human-rights-in-balochist_b_9541436
 manameloka ny famonoana ara-pitsarana: https://news.un.org/en/story/2021/02/1083772